Ebe E Si Nweta Casino Online - Online Casino bonus codes
Online cha cha Daashi Codes > Ebe Ntanetị Ịntanetị French
Loading ...N'ụzọ dị ịtụnanya, na Paris na gburugburu ya ọ dịghị ịgba chaa chaa. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na n'okpuru iwu ndị France ugbu a, a na-etinye casinos naanị n'ebe ndị isi natara ọkwa nke ụlọ ọrụ ahụ ma si na Paris, n'ebe dị anya karịa ihe karịrị 100 kilomita. Nanị otu bụ cha cha cha na Engen. Ebe a na-eme ya bụ 14 kilomita site na Champs Elysées. Open casinos na Engen-les-Bains dị na 1901. Mgbe afọ 10 gasịrị, ọ bụ ebe nkiri ahụ meghere, na ụlọ ọgwụ nọ ebe a. Na 1988 ọ bụ Group Lucien Barrière zụtara ya. Na 2001, e wughachiri ụlọ ahụ, a na-emegharịkwa chaa chaa ọhụrụ na April 2002. Ime ụlọ na-emepụta onye a ma ama bụ Jacques Garcia. Ọ kwadoro isi iyi ọkụ ọkụ ahụ, okpuru na kpakpando, ọdọ na ihe ndị a na-achọ mma. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ịgba chaa chaa na Engen - bụ casinos kasị baa uru na France. O nwere tebụl maka igosi ihe nkiri, blackjack, yana Bekee na French roulette na egwuregwu ndị ọzọ. E nwekwara igwe oghere.
Ndepụta nke Top 10 French Online Casino saịtị
Igwe oghere na casinos na Engen-les-Bains
Ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa mbụ nke dị na France meghere ya na Paris na narị afọ 17th. Ihe omume a na-ekere òkè dị mkpa n'ime mmepe ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa, ọ bụghị naanị na France ma n'ụwa nile. Akpa, ịgba chaa chaa bụ ụzọ isi mejupụta akụ akụ na ụba, uru akụ na ụba site na ịdị adị nke ụlọ ọrụ ndị a pụta ìhè, ya mere, malitere ịpụta cha cha ọhụrụ. Mgbe mgbanwe French, a machibidoro cha cha chaa, ọ na-ewu ewu ọzọ. Ndị na-egwu chaa chaa mbụ nwere ike igwu egwu ole na ole nke ịgba chaa chaa na roulette, ma na mmepe ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa emeela ka ịgba chaa chaa gbasaa. Site n'okporo ụzọ, ugbu a na-enwe mmasị dị otú ahụ roulette e mepụtara, dị ka ọtụtụ ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme, ọ bụ na France. Ihe odide ya bụ Blaise Pascal, nkà ihe ọmụma, na mgbakọ na mwepụ bụ nke a na-arụ ọrụ na nchọpụta nke mmegharị mgbe niile.
Taa, na France, e nwere ise ise, nke so n'ime ụlọ ọrụ kachasị ukwuu nke mba ahụ:
- Groupe nke Lucien Barrière;
Gbanwee "Barrièrede Deauville"
Ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ ndị a gụnyere ụlọ nkwari akụ Barrièrede Deauville, nke dị n'obodo Deauville. Akụkọ banyere chaa chaa nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 150. A chọpụtara ya na 1864, ọ bụ onye mbu nke Duc de Morny, ma azụmahịa ụlọ ahịa ahụ jọgburu onwe ya ma mechie ya. Nchoputa ohuru nke ulo akwukwo a di na 1912. Nye ya, e wuru ya ụlọ ọhụrụ na omenala ndị Atens, ụlọ a dị ugbu a. Ụlọ ihe nkiri a aghọwo ebe kachasị amasị maka ndị na-asụ French na Britain, nakwa ọtụtụ ndị ọchụnta ego na ndị ọkachamara. Ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa a - ihe nnọchianya nke French mara mma na okomoko. Taa, ụlọ ọrụ ahụ nwere nwa nwanne Lusena Barrier, nke a na-akpọ aha ya maka asọmpi ịgba chaa chaa. Ụgbọ ala a nwere nnukwu ịgba chaa chaa: 325 slot machines na 24 tebụl teepu maka egwuregwu na Punto Banco, Roulette, Blackjack, craps, na ndị ọzọ. E nwekwara ụlọ mmanya atọ, ụlọ oriri atọ, oriri na nnọkọ ogbako, ụlọ nkwari akụ ahụ dị narị asaa. Ịga na casinos dị mkpa iji chee akwụkwọ edemede na ịme òkè na egwuregwu ndị dị na tebụl ị ga-edebanye aha na mbụ.
Casino «LE LYON gba»
E mepere Casino «LE LYON VERT» na 1882, na 1991 malitere iso otu Partouche. Ọ dị na Lyon. Ụlọ ịgba chaa chaa a nwere nnukwu ụlọ ịgba chaa chaa, ụlọ nri na ntakịrị họtel. Na chaa chaa a dịka ọ bụla ụlọ ịgba chaa chaa ọzọ dị na France, e nwere nnukwu igwe igwe egwu: poker vidio, 174 na 224 setịpụrụ oghere ngwaọrụ. E nwekwara ohere igwu egwu na American na European roulette, Texas Hold'em poker, blackjack na egwuregwu ndị ọzọ nke ohere. N'oge ezumike, ị nwere ike ịnọdụ n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ, na-enwe ezigbo nri.
Casino Aix-en-Provence, nke a maara dị ka Pasino, meghere na 1923. Ihe owuwu ya ghọrọ nnukwu ụlọ ọrụ mmepe obodo nke obodo ahụ mepụtara. Ụlọ ọrụ ahụ bụ ụlọ ịgba chaa chaa, ụlọ ọgwụ na-ekpo ọkụ, nnukwu ụlọ na ogige mara mma. Casino Pasino nwere ike igwu egwuregwu dị iche iche nke ohere, gụnyere inwe ohere igwu egwu na mpempe akwụkwọ, poker vidiyo, roulette na vidio, na mgbakwunye, nnukwu egwuregwu dị iche iche nke kaadi na ntụrụndụ ndị ọzọ. A na-enwe ọtụtụ ihe omume ntụrụndụ mgbe nile, gụnyere mgbakọ dị iche iche na mmemme, egwuregwu egwu.
Okpuru chaa chaa kachasị elu na France, na-ekpuchi oghere mita 650, na-egbu oke ya, yana ntụrụndụ na okomoko okpu na ime mma. Enwere ike iji ya tụnyere ịma mma nke diamond. Ọ na-ezo aka n'ọgbọ ọhụrụ nke ịgba chaa chaa. N'ime ime, echiche nke casinos nwere mmetụta akụkọ ifo Roald Dahl's "Charlie and the Chocolate Factory." The cha cha nwere ike ọ bụghị nanị na-egwu egwuregwu nke ohere maka ego, kamakwa iji ụtọ ndị ọzọ ụdị ntụrụndụ.
Casino «Cannes Croisette» emi odude ke esịt ọwọrọetop Palais des Festivals ke Cannes, emi enyenede otu Lucien Barrière. Ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke ogige egwuregwu bụ 3,000 square mita. A na-eji ụlọ a na-egwu egwuri egwu. N'ụlọ ụlọ nke cha cha cha nwere ike igwu egwu dịka poker, blackjack, roulette, baccarat na igwe oghere n'ebe ahụ. Mpaghara Casino nwere ọtụtụ osisi, ụlọ oriri na ọṅụṅụ gastronomic na ụlọ ịgba egwu. Ị nwere ike ide ụlọ na nkwari akụ.
Ịgba chaa chaa na France
O kwesịrị ikwu "Paris" na "Eiffel Tower", dị ka ọtụtụ obi na-amalite ịkụ aka ngwa ngwa na ichetụ n'echiche na-ese onyinyo ima. Taa CasinoToplists ga-aga n'ala nke ịhụnanya na nnwere onwe - France. Ya mere, iji kọwaa okwu a ma ama, ọrụ anyị taa "ịhụ Paris na igwu egwu."
France - okwu ole na ole banyere akụkọ ihe mere eme na ọdịdị ala;
cha cha cha ịgba chaa chaa mara iwu dị na mpaghara ebe;
Ọ bụ ọrụ nke Ozi Ụlọ Intanet.
Ndị kasị ama casinos na France:
Club Aviation Club de France na Paris;
Casino Enghien 14 kilomita si Paris;
ụlọ ịgba chaa chaa na Megève Mont Blanc.
Ise nlegharị anya nke Paris na adreesị;
Ebe France, na obere akụkọ ihe mere eme
France - mba mara mma n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Europe enwewo ọtụtụ oge siri ike, ma ghọọ onye nke kachasị mma ma dị nchebe gburugburu ụwa. Aha zuru oke nke ala - French Republic. Na France, ikike nke ndị mmadụ na mba naanị maka ndị mmadụ. Ebumnobi - "Nnwere onwe, Ịha Nhata, Agbụrụ."
Onyeisi nke steeti bụ onyeisi oche, Francois Hollande, ma ọtụtụ ike ndị e nyere Prime Minister Manuel Valls. Taa, ihe karịrị nde mmadụ 66 nọ na France, nke 90% - ụmụ amaala mba ahụ. Ngwakọta mba dị mma ma dịgasị iche iche, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na French na-achịkwa. E nwere ọtụtụ ndị Alsatians, ndị na-ahụ maka ọchịchị, ndị Briten, ndị Juu, Flemish, Catalan, Basques, ndị Corsica, ndị Armenia.
Isi obodo France - mara mma nke Paris, nke, dị ka ị maara, ịhụ ma nwụọ n'udo. Akụkọ ihe mere eme nke obodo ukwu nke oge a, nke bụ ebe obibi gburugburu 2.5 nde mmadụ, malitere na narị afọ nke atọ BC. e. Nke a bụ ezigbo omenala, akụkọ ihe mere eme, akụ na ụba na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, dị mma maka ịma mma ya na nnukwu mma.
France na-ezo aka n'ekpere ịgba chaa chaa na ụmụ amaala ya na ndị nleta, n'ókèala nke ọtụtụ casinos na ụlọ ịgba chaa chaa, kamakwa iwu nke nzukọ ha kama nlezianya. Ka anyị nyochaa.
Casinos na ịgba chaa chaa na France
France - otu n'ime mba ndị kasị dị egwu n'ụwa, na French - otu n'ime ndị egwuregwu kachasị ike. Ọtụtụ ịgba chaa chaa mere ebe a.
N'agbanyeghị, ọtụtụ n'ime casinos dị n'ụwa, ọbụna ụtụ isi a kwụrụ ụgwọ dịka "egwuregwu French." Otu n'ime ụdị roulette a na-akpọ "French Roulette" (nke a makwaara dị ka European Roulette); na n'etiti ụdị nke roulette, French naimenshee nwere uru nke cha cha, nke nwere ike ghara ịdaba na-atọ ụtọ fan nke egwuregwu.
Dịka n'ọtụtụ mba Europe, na France, àgwà pụrụ iche maka ịgba chaa chaa. Ha kwadoro, ma ị nwere ike igwu naanị na ebe a kapịrị ọnụ. Casino na-emeghe malite na 1942 naanị n'ógbè ndị ahụ nwere ọnọdụ ntụrụndụ nke ọha, ma a ghaghị iwepụrụ ha na Paris ma ọ bụghị ihe karịrị 100 kilomita.
Tupu iwu nke iwu na mba ahụ bụ nnukwu ụlọ ịgba chaa chaa, ọtụtụ n'ime ha ga-emechi. Taa na-eji 197 casinos eme ihe, nke a na-elekọta nke ha niile site n'aka Ministri nke ime obodo. Nchịkwa nke ụlọ ọrụ ahụ, usoro azụmahịa na ọrụ a na-etinye na ihe ka njọ.
Mkpebi na oghere nke ụlọ ịgba chaa chaa ọhụrụ na-enye ndịọrụ na-ahụ maka ime ụlọ n'onwe ha, ma a na-enye ikike nke mbụ na ọkwa obodo, nke Plenipotentiary Commission kwadoro. MIA na-akọwa ndepụta egwuregwu maka ụlọ ọrụ ahọrọ oke ndị ọrụ niile.
Na 1986 iwu pụrụ iche na-abanye ọbịbịa nabatara ụzọ maka ụmụ nwanyị. A naghị enye ndị ọrụ ohere iweta cha cha ka ha na-arụ ọrụ ego ma ọ bụ ibe, na a hụrụ iwu a, dụnye uwe pụrụ iche n'eweghi akpa. Na France, ị nwere ike igwu egwu site na afọ 18. Ejighị ndị mmadụ na-edo edo. N'ọnọdụ ọ bụla, e nwere listi ojii, nke ga-edozi Schuler, loser na ludomany (aha ha nwere ikike nye ndị ikwu), na ndị ọbịa ndị ọzọ na-adịghị anabata.
Casino dị na France abụghị naanị ebe amaala, kama ọ bụkwa ego siri ike maka ego. Kwa afọ, ego a na-enweta ọtụtụ narị nde euro. Ụtụ isi na-aga n'ihu maka ụlọ ọrụ, uru karịa 9.5 nde Euro, bụ nnukwu pasent - 80. Naanị ígwè ọrụ na-emepụta 50% nke ego ha nwetara, kaadị - banyere 40%, ndị ọzọ dabara na tebụl roulette.
Ndị kasị ama casinos na France
Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ dị na Paris nwere ụlọ ịgba chaa chaa, a ka nwere ụlọ ịgba chaa chaa Njikọ ụgbọelu de France , nke mere ka ụfọdụ egwuregwu, dị ka poker, baccarat na backgammon. Nke a bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mma nke mba ahụ, meghere na 1907. A na-agbasochi koodu uwe. Iji banye n'ime, jide n'aka na ị ga-aga n'ihu, tinyere uwe akwa, tinye kaadị klọb. Ị nwekwara ike ịgafe na oku nke onye na-akwụ ụgwọ. Na 2005 e mere World Poker Tour, nsọpụrụ a bụ naanị mma kacha mma.
Ihe ọzọ - cha cha cha Enghien , bụ naanị 14 kilomita si Paris. Engen bụ ebe mara mma nke mara mma na ọdọ mmiri ahụ, oge awa nke 10 ruo n'abalị 4. Ọ bụ egwuregwu dị egwu na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, egwuregwu na egwuregwu. Ha na-abịa ebe a na-egwu egwuregwu, egwuregwu dị iche iche kaadị na ụdị 450.
Enwere ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa pụrụ iche Megève , dị na Mont Blanc. Igwe ala a ji obi ike na-edu ndú dị ka ego si enweta ego. Nke a abụghị ihe mgbagwoju anya, n'ihi na ọdịdị mara mma gbara ya gburugburu, ọ bụghị naanị ịgba chaa chaa na-enye ọhụụ, kamakwa ohere ịnweta oge na disko, na piano ma ọ bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
De Deauville Barrière - ihe kacha mma kacha mma, nke dị na beach ebe. Ọ dị n'akụkụ okpukpu osimiri egwu nke ihe nkiri "Nwoke na Nwaanyị" Lelouch. A na-ewere ebe a dị ka otu n'ime ihe ndị mara mma na France.
Ebe nkiri Paris
Eiffel Tower. Adreesị: Champ de Mars, 5 Avenue Anatole France. Ọ bụ ihe nnọchiteanya nke Paris na France - nke ahụ na-ekwu ya niile.
Ogwe njigide. Adreesị: Ebe Charles de Gaulle. Ebube oge ochie dị ebube, nke Napoleon nyere iwu ka ọ mara nnukwu mmeri ya.
Louvre. Ebe: Palais Royal. Otu n'ime ụlọ ngosi ihe mgbe ochie kachasị mma na Europe, nke dị na Obí eze.
Notre Dame de Paris. Adreesị: 6 Parvis Notre-Dame - Ebe Jean-Paul II. Obi ime mmụọ Parida na ezigbo basilica Katọlik.
Ụlọ ahịa Luxembourg. Adreesị: 6e Arrondissement. Ezigbo ụlọ na ogige ntụrụndụ, nke dina n'elu hectare 26.
Ezigbo mmasị banyere French na French
Aha mba ahụ "France" nwere German, nke sitere na aha ebo Franks bi n'ógbè ahụ. Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ ndị obodo dum na-asụ asụsụ ahụ ma nwee ndị Rom na-asụkarị Gallo-Roman, aha ahụ bịara n'ihi asụsụ German.
Na France, nnukwu ụlọ ahịa n'ụwa - 4969.
Ọ bụ na France mere kristine, biking, ballet, chanson, Gothic.
Ebe ọ bụ na 2011, a na-ezere redio na telivishọn French na-akpọ Facebook na Twitter.
Site na nri ehihie, ndị French na-arụ ọrụ mmanya mgbe nile.
France - Obodo maka ugbo Europe.
Ndị French na-ekwu okwu, na-ahọrọ ndị di otú ahụ ị ga-enwe ike ikwu.
Na France, ụtụ isi kasị elu na EU.
Ọtụtụ ndị French chọrọ ibi na Kanada.
France na map nke Europe
0.1 Ndepụta nke Top 10 French Online Casino saịtị
1 Ịgba chaa chaa na France
1.0.1 Ebe France, na obere akụkọ ihe mere eme
1.1 Casinos na ịgba chaa chaa na France
1.1.1 Ndị kasị ama casinos na France
1.1.2 Ebe nkiri Paris
1.1.3 Ezigbo mmasị banyere French na French
1.1.4 France na map nke Europe